Tag: kuenderana | Martech Zone
Smarketing: Kugadzirisa Yako B2B Kutengesa & Kushambadzira Matimu
Chipiri, April 6, 2021 Chishanu, April 9, 2021 Stephanie Sperry
Neruzivo uye tekinoroji pamunwe wedu, rwendo rwekutenga rwachinja zvakanyanya. Vatengi ikozvino vanoita tsvagiridzo yavo vasati vambotaura nemumiriri wekutengesa, zvinoreva kuti kushambadzira kunoita basa rakakura kupfuura nakare kose. Dzidza zvakawanda nezve kukosha kwe "smarketing" kune rako bhizinesi uye nei uchifanira kunge uchifananidza ako ekutengesa uye ekushambadzira zvikwata. Chii chinonzi 'Kurova'? Smarketing inobatanidza yako yekutengesa simba uye ekushambadzira zvikwata. Inotarisa kuenzanisa zvinangwa uye mamishini
Iyo Sisitimu Hunhu uye Maitiro Anodiwa nemaCMOs
Svondo, June 5, 2016 Douglas Karr
Kuva nesangano kwave kuri kupa mubayiro uye kunonetsa. Pamudzi wezvose zvatinoitira vatengi vedu, isu tichiri kuda kubatsira kufambisa vatengi kuburikidza neyekushambadzira yekukura modhi. Inotigonesa kushanda pamwe neese maviri ekutanga uye emabhizinesi vatengi zvakafanana, zvinehunyanzvi kukura kwavo kuziva uye mari pamhepo. Chandakanga ndisingazive ndechekuti shanduko yakadii isu, sevamiririri, yataizofanira kuita kuti tigare pamberi pemakomba uye kuramba tichikwikwidza
5 Nzira dzeKuenzanisa Kutengesa uye Kushambadzira kune Boost Revenue
Chitatu, July 22, 2015 Chipiri, July 21, 2015 Douglas Karr
Imwe nguva isu patinotora mutengi, nhanho yekutanga yatinotora ndeyekuva mutengi. Hatisi kuzosheedza timu yavo yekutengesa. Tichanyorera tsamba yavo yeemail (kana vaine imwe), kurodha pasi nhumbi, kuronga dhemo, uyezve kumirira timu yekutengesa kuti isvike kwatiri. Tichataura nezve mukana uyu sekunge isu taive tichitungamira, uye edza kupfuura nemukati mekutengesa kutenderera navo. Iyo
Iine yakawanda mavhoriyamu e data akagadzirwa munzira dzakawanda dzekutengesa, mabhureki anopikiswa kuronga nekushandira iyo chaiyo data midziyo yekuwedzera kuyambuka-chiteshi mashandiro. Kuti unzwisise zvirinani vateereri vako, tyaira zvimwe zvekutengesa, uye udzikise kushambadzira marara, iwe unofanirwa kuenzanisa yako brand segmentation nedhijitari yekuita uye nekuzivisa. Iwe unofanirwa kuenzanisa chikonzero nei ivo vachitenga neavo vanotenga (chikamu chevateereri) kune izvo (ruzivo) uye sei (kuita kwejeneti) kuti vese
China, August 8, 2013 Douglas Karr
Big Dhata. Handina chokwadi nezvenyu vanhu asi vazhinji vedu vatengi vari kunyura mairi. Nepo murwi wedhata uchiramba uchiwanda, isu tinowanzoona kuti vazhinji vedu vatengi havasi kubata mamwe eakakosha marongero ekushambadza akakosha kuwana, kuchengetedza nekuvandudza kukosha kwevatengi. Kwete izvozvo chete, ivo vanonetsekana nehukama hukuru pakati peIT nekutengesa. Nezuro chete, ndaifanirwa kutaura kune mumwe wevatengi vedu 'IT timu ku